Izindaba - Yimuphi okungumshini wokucwebezelisa okulungele
Yimuphi umshini wokupholisha ofanele kuwe?
Kulezi zinsuku, kunemikhiqizo eminingi kakhulu yemishini yokupholisha emakethe, kepha imvamisa ingahlukaniswa ngezinhlobo ezintathu, okuyi-rotary polisher, i-double-action polisher, ne-rotation da polisher.
I-rotary polisher ingumshini wokupholisha osebenzisa kuphela uhlobo lokunyakaza olungu-1 ukudala umphumela wokupholisha. Kuhle kakhulu ekusikeni, isebenza ngokushesha, kepha futhi kudinga ulwazi oluningi nolwazi ukuze ulusebenzise kahle.
Isipolishi sesenzo esimbili sisebenzisa ukunyakaza okuyindilinga okuhlanganiswe nokunyakaza kokuphotha ukwakha isenzo esinengqondo esiphindwe kabili. Lokhu kunyakaza kuyasiza lapho upholisha indawo ngomshini. I-double action polisher yaziwa ngokuba lula ukusebenza nayo, ikwenza kube kuhle kwabaqalayo.
I-polisher yokujikeleza okuphoqelelwe inhlanganisela yezici ezijikelezayo nezenzo ezimbili.
Iphinde ibe i-action action polisher, ijikeleza emizileni ehlukene, ngakho-ke isabalalisa ukushisa okuningi ngaphesheya kopende, ikwenze kuphephe ukwedlula i-rotary polisher. Kepha ngeke iyeke ukuphotha noma ngabe usebenzisa phansi kangakanani uma kuqhathaniswa ne-polisher-action polisher. Sekukonke, ukuzungezisa okuphoqelelwe kunikeza isenzo esingcono sokusika uma kuqhathaniswa ne-DA, kepha imininingwane ephephile yemoto uma iqhathaniswa ne-rotary.
Khetha i-Dual Action Polisher uma:
1.Umusha kumshini wokupholisha;
2.Ufuna into elula ukuyisebenzisa;
3.Ufuna ukuthatha ama-swirls ambalwa nokuklwebheka okulula okuvela kupende wakho;
4. Unakekela kuphela imoto yakho noma izimoto zomndeni wakho;
5.Ufuna isipholisi semoto esiphephile, kodwa esinamandla ngokwengeziwe;
6.Ufuna ukuyisebenzisa njalo ukugcina umsebenzi wakho wokupenda;
7.Ufuna ukuqala ibhizinisi elinemininingwane yesikhashana noma eligcwele;
8.Ufuna ithuluzi lokuqinisekisa ukuphela okungenawo umoya;
9. Izikebhe / amaRV noma abanikazi bezindiza bafuna indlela engcono, esheshayo, nephephile yokugcina izikebhe / amaRV / izindiza zabo.
Khetha i-Forced Rotation DA Polisher uma:
1. Ufuna i-polisher ephephile, kepha enamandla kakhulu;
2.Umusha ekupholiseni umshini kepha uyakwazi ukufunda ngokushesha;
Usebenzise abapholishi bezenzo ezimbili futhi ulungele isinyathelo esilandelayo;
Ufuna imiphumela itholakale kusuka ku-rotary ngakho konke ukuphepha kwe-DA!
Khetha i-Rotary Polisher uma:
1.Unezici ezinkulu zokupenda ofuna ukuzisusa;
2.Unezikhathi ezithile zokubamba indlela umshini osebenza ngayo;
Unebhizinisi elinemininingwane elifuna ukwengeza ithuluzi elinamandla ngokwengeziwe;
4.Ufuna ukuba yingcweti yokubeka imininingwane;
5. Ungumuntu othanda ukubamba iqembu elilodwa noma amaningi amanye amathuluzi futhi manje ukulungele ukudlulela kupolisha ojikelezayo.